Tag: definition of marketing analytics | Martech Zone
Ithegi: inkcazo ye-analytics yokuthengisa
Yintoni uhlalutyo? Uluhlu lweeTekhnoloji zeNtengiso zoHlahlelo
NgoMvulo, Julayi 7, 2014 NgeCawa, Oktobha 19, 2014 Douglas Karr
Ngamanye amaxesha kufuneka sibuyele kwizinto ezisisiseko kwaye sicinge ngenene ngezi teknoloji kunye nendlela eziza kusinceda ngayo. Uhlalutyo kwinqanaba elisisiseko lolwazi oluvela kuhlalutyo lwedatha. Sixoxe ngesigama sokuhlalutya iminyaka ngoku kodwa ngamanye amaxesha kulungile ukubuyela kwiziseko. Inkcazo yeNtengiso yoHlolo Uhlalutyo lokuthengisa luquka iinkqubo kunye neetekhnoloji ezenza ukuba abathengisi bavavanye impumelelo yamanyathelo abo okuthengisa.